I-Cozy Waterfront Getaway - I-Airbnb
I-Cozy Waterfront Getaway
Indlu encane ibungazwe ngu-Christine
Ngo-329 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
Ikhaya lesivakashi lesimanje emfuleni i-St. Lawrence - elakhiwe eminyakeni engu-6 edlule, indawo yokupaka yangasese ehlukile, igceke elibiyelwe, ama-patio amakhulu ane-BBQ, i-firepit nezitebhisi ezansi kompheme wamanzi wangasese onezitebhisi zokubhukuda. Ukuhlala okunethezekile ku-525 sq ft nokushisa okuphansi kanye no-A/C kuyo yonke indawo, indawo yomlilo yegesi, futhi ujabulele ukusetshenziswa kwamahhala kwama-kayak angu-2 namabhayisikili anamafutha angu-2 namabhayisikili okugwedla (AMASHA ka-2022) aqashiswayo. Ukuhambahamba okufushane ukuya endaweni yokudlela yase-Cornwall 's #1 "Inhloko Yezimvu" ne-Glenwagen Park enamakhilomitha angu-2 + emizileni emihle, nomzila wamabhayisikili.
Woza uzokhululeka emvelweni, udobe endaweni ephansi, i-bbq ebheke umfula noma uhlale ubukele futhi imikhumbi iyadlula futhi kushone ilanga unyaka wonke. Jabulela ubusuku obupholile bezothando ngaseziko noma endaweni yokucima umlilo ngaphandle osebeni lomfula.
Idokhi yesikebhe ebusuku kanye nepulaki yokushaja imoto yeLevel 2 EV iyatholakala uma uceliwe.
I-wifi esheshayo – 329 Mbps
Isempumalanga ye-Cornwall emfuleni omangalisayo we-St. Lawrence e-Glenwagen enobungane. Itholakala ehoreni elilodwa entshonalanga ye-Montreal nehora elilodwa eningizimu-mpumalanga ye-Ottawa. Indawo yokudlela eyintandokazi ye-Cornwall, i-Sheeps Head Bistro, etholakala kalula ngaphesheya komgwaqo ukuze udle, uvulande noma uphume. Kukhona nezinye izindawo zokudlela eziningana ezibheke ulwandle eceleni kwe-County Road 2 ehamba phambili ukuya e-Lancaster, ON ukuze ujabulele ukudla kuma-patio abo angasemanzini! Imizila eminingi yokuhamba eseduze, amapaki, izindawo zokulondoloza kanye nemizila esetshenziswa kaningi njenge-Summerstown Trails.
Indawo eseduze kakhulu nesikebhe i-Grays Creek Marina engamakhilomitha angu-2.5 entshonalanga yendlu yezivakashi. Igumbi eliningi lamaloli kanye ne-trailer yesikebhe emgwaqeni ohamba ngemoto ubusuku bonke.
Ukufinyelela kulula ngokuzingenela nge-smartlock. Sinikeza izivakashi zethu ubumfihlo obungcono kakhulu noma kunjalo, uma kudingeka impendulo esheshayo nabanikazi be-Rock no-Christine kusayithi.